किम जोङ उनका कतिवटा सन्तान छन् ? को हुनेछ उनको उत्तराधिकारी ? « Lokpath
२०७७, १० माघ शनिवार १७:२५
किम जोङ उनका कतिवटा सन्तान छन् ? को हुनेछ उनको उत्तराधिकारी ?
प्रकाशित मिति : २०७७, १० माघ शनिवार १७:२५
उत्तर कोरियाली नेता आफू जति कम मिडियामा प्रस्तुत हुन्छन् त्यो भन्दा अझै कम देखापर्छ उनको परिवार ।
उनको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनको बारेमा खासमा धेरै कुराहरु बाहिरिएका छैनन् । बाहिरिएपनि ती कसैले सुनेको, देखेको वा अन्दाज गरेको भरमा भनिएका कुराहरु हुन्छन् । यस्ता खबर फैलाउने स्रोत नै विश्वसनीय हुँदैनन् प्राय । तेस्रो व्यक्तिले व्याख्या गरेको कुरामा केही थपघट त हुने नै भयो ।
यस्तो गोपनीय जीवन बाँचिरहेका किम जोङ उनको व्यक्तिगत जीवनप्रति धेरैलाई चासो होला । उनका छोराछोरी कतिजना छन् ? कत्रा छन् ? के गर्छन् भन्ने जिज्ञासा पनि धेरैलाई होला ।
किम जोङ उन र श्रीमती रि सोल जुका ३ जना छोराछोरी भएको विभिन्न स्रोतबाट खुलेको छ । उनीहरु ११ देखि ४ वर्षसम्मको उमेर समूहका रहेका छन् ।
विश्लेषकका अनुसार रि सोल जुले पहिलो सन्तानलाई सन् २०१० मा जन्म दिएकी थिइन् ।
दक्षिण कोरियास्थित सेजोङ संस्थाका अनुसन्धानकर्ता चोङ सोङ चाङका अनुसार किम जोङ उन र रि सोल जुको विवाह सन् २००९ मा भएको थियो र त्यसको अर्को वर्ष नै उनीहरुको पहिलो सन्तानका रुपमा छोरा जन्मिएका थिए ।
त्यसपश्चात् सन् २०१३ मा उनीहरुको दोस्रोे सन्तानका रुपमा छोरी जन्मिएकी थिइन् । जसको नाम हो, किम जु ए ।
रि सोल ९ महिनासम्म कुनै सभा, समारोह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित नभएका कारण सन् २०१७ मा उनीहरुको तेस्रो सन्तान जन्मिएको अनुमान गरिएको छ ।
दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय इन्टेलिजेन्स सर्भिसका अनुसार उनीहरुको तेस्रो सन्तानको जन्म भइसकेको छ यद्यपि बच्चा छोरा कि छोरी भनेर सार्वजनिक गरिएको छैन ।
हालै किम जोङ उनको मृत्यु भएको खबर फैलिएतापनि यो खबर अफवाह मात्र भएको उत्तर कोरियाको दाबी छ । दक्षिण कोरियाले पनि उनी ‘सुरक्षित र जीवित’ भएको पुष्टि गरेको छ । यदि उनलाई केही भइहाल्ने हो भने उनको कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मेवारी उनकी बहिनी किम यो जोङको काँधमा जान्छ ।
अहिलेसम्म उत्तर कोरियामा महिलाले नेतृत्व सम्हालेका छैनन् । त्यसैले किम यो जोङ सत्तामा पुग्नु भनेको नयाँ इतिहास रचिनु हो ।
सोल । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाय–इनले दक्षिण कोरिया जापानसँग वार्तामा बस्न तयार
इराक भ्रमणमा जाँदै पोप फ्रान्सिस
बग्दाद । इसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसले यही शुक्रवार मुस्लिम राष्ट्र इराकको भ्रमण गर्ने
नाइजेरियामा बन्दुकधारीले गरे ७ जनाको हत्या
अबुजा । अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाको उत्तरी राज्य कडुनाको गाउँमा बन्दुकधारीले आक्रमण गरी सात
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएपछि मोदीको प्रतिक्रिया – ‘मलाई त थाहा पनि भएन’
काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो डोज लगाएका
एकै सालमा तीन वटा दशैँ !